Solution kune "Verenga-chete faira system" kukanganisa | Linux Vakapindwa muropa
El sangana nezvikanganiso paunenge uchishandisa kugovera kwako kufarira hakugone kungorwadza chete muchipfuva, asi kutemwa nemusoro kana iwe usingazive zviri kuitika uye nei zviri kuitika kwauri.
Kunyangwe iyi "Read-chete faira system" meseji yakatoitika kwandiri kakati wandei, ichikonzera kuti ndirasikirwe nemusoro uye, pamusoro pezvose, ndakaguma ndadzoreredza sisitimu yangu yese, nekuti pakuita chimwe chiitiko kuburikidza neiyo terminal, inoratidza iyi meseji.
Chinhu chekutanga chatinoenderera mberi kuita kutangidza komputa, iyo inotitungamira kune iyo yekuti kana isu tachitanga iyo, system yacho haingotange iyo graphical server uye isu tinogashira inozivikanwa dema skrini:
"BusyBox v* multi-call binary
Iko vazhinji vanopedzisira vasiya nekudzosera system.
Asi chii isu tinofanira kuita kudzivisa kutangazve iyo system, Iyi ndiyo inonyanya kukurudzirwa nekuti patiri mukati, sekuratidzwa kweshoko, iyo system iri chete mune kuverenga mode saka hatigone kunyora chero chinhu muhurongwa.
Nhanho yekutanga ndeyekuedza kuona iko kukanganisa uye kutsvaga netiweki isu tiri mukati mechirongwa, zviri nyore uye pamusoro pezvose kuyedza kuyeuka zvakatitungamira kwazviri.
Kunyangwe zvakajairika iwe zvaunogona kuwana pamambure, ndizvo izvo maitiro anozvidzivirira, Kupiwa iyo dhisiki rauri kushandisa harisisiri rakanakira kuchengetedza data.
Izvo zvazvinoitika ndezvekuti zvinongopinda chete kuverenga mode saka zvinongotibvumidza isu kuwana iyo data, asi pasina panzvimbo iyoyo hazvibvumidze isu kuti tikwanise kuita shanduko mukati mayo.
Kwandiri izvi hazvishamise, sezvo ini ndangove nediki nyowani kwemavhiki mashoma uye, mushure mekutarisa iyo SMART dhata uye zvikamu, hazvigoneke kuti yatove mumamiriro akashata.
Sezvo pachangu handina kubvuma kuti dhisiki rangu raive ratove rekupedzisira, chinhu chekutanga chandafunga kuita kuchenesa Hardware yangu, yeiyo yeimwe tunhu tirikukanganisa mashandiro ayo.
Ini ndakatanga timu yangu zvakare uye ini ndakawana yakafanana mhedzisiro.
Chinhu chakatevera chandakaita chaive chinja tambo dzediskMuchiitiko changu SATA, ndinoziva kuti tambo diki dzvuku dzinowanzo kukuvara nekukasira kungave nekushisa kwakanyanya kana nedzimwe mbiri.
Mhinduro iyi yaindibatsira.
Mune imwewo nyaya ndizvo padanho re software saka isu chatinofanirwa kuita kuziva kuti ndechipi chikamu chakaitika ku "Verenga-chete faira system".
Muzviitiko zvakanakisa, kana chiri chikamu chakasiyana pane pane sisitimu yako, une ruoko rwepamusoro, sezvo iwe uine nzvimbo yekugona kukwira nekudzikisa zvakati kupatsanurwa pasina matambudziko.
Nokuda kweizvi Tinogona kushandisa iyo terminal uye kuita inotevera mirairo, uko kwatinozotanga kuona chikamu chegomo uye toenderera mberi nekuchidzokorora nemvumo yekuverenga nekunyora:
Kana chikamu chacho chikazivikanwa, tinochirangarira, iko / sdXx ichave iri nzvimbo yepamusoro, inogona kuva / sdb1 kana / sdc, nezvimwe.
Si yako system partition ndiyo yaive yakachengetedzwa, kushandisa uyu murairo hakushandire iwe, saka isu tinofanirwa kushandisa zvinotevera:
Ukaramba uchiwana iko kukanganisa kumwe chete, tinogona kusarudza kumhanya zvinotevera:
Zvachaita tarisa faira system uye edza kugadzirisa zvinoenderana.
Pano isu tinofanirwa kunyora pasi mabhuroko ari kuzotizarurira dzine zvikanganiso, mune yangu nyaya ndinoratidza chimwe chinhu seichi:
Mune ino yekupedzisira kesi, isu tinofanirwa kuwana epamberi sarudzo dzesisitimu yedu kubva kuGRUB uye kuita fsck.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Solution kune iyo "Verenga-chete faira system" kukanganisa
Ndatenda. Makandiponesa nekuti ndaifunga kuti ndarasa zvese zvandaive nazvo paApache server. Ini ndakachinja dhisiki tambo uye zvakatanga zvese zvakanaka. Iyo yakashata tsika yekusatsigira kumusoro kune imwe komputa.
Frank Dominguez akadaro
Ini ndiri mutsva ku linux uye ndaive nematambudziko ekushanda mune zvimwe zvikamu, ndatenda zvaive zvinobatsira, ikozvino ndogona kuenderera
Pindura kuna Frank Dominguez
Manuel Ramos akadaro
Ndatenda, ndiwo musoro kuve nematambudziko aya uye kunyanya kana iwe uri mutsva kuLinux. Iye zvino ndinogona kuenderera ndichishandisa komputa yangu
Pindura Manuel Ramos
Samuel Colque Flores akadaro
Ndatenda zvikuru nezviri mukati izvi. Mwari vakukomborere.
Pindura kuna Samuel Colque Flores